Xog muhiim ah oo ku saabsan safarkii Darmaajo ee dalka Sucuudiga -
Madaxweynaha Dowladda federaalka Soomaaliya MaxamedCabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan waxaa uu safar gaaban ku tagay Boqortooda Sucuudiga waxaana uyeeray Boqorka Sucuudiga Boqor Salamaan waxaana Xogta aan helnay sheegaysaa in Farmaajo loo soo jeediyay in uu ka laabto arinta dhax dhaxaadnimada ah.
Madaxweynaha ayaa waxaa na loo sheegay in uu diiday oo waliba uu ku adkaystay go,ankii hore Boqorka sucuudiga ayaa waxaa la sheegay in farmaajo usoo jeediyay wax alaale wixii qarasha ah oo uu sheegto faraqa loogu shubayo.
Madaxweynaha ayaa markale waxaa uu u jeediyay boqorka sucuudiga in lacag uusan ku doorsanaynin sharaftiisa iyo tan umadda soomaaliyeed.
Dhinaca kale waxaa maanta uu usafray madaxweynaha dalka suudaan la,mna oga waxa ay ka ogaadeen Suucuudiga.
Related Items:Featured, Xog muhiim ah safarkii farmaajo ee sucuudiga
Faa Faahin dheeraad ah oo ka soo baxday Dilkii ka dhacay Garoonka Gaalkacyo